Haweenay argagixisnimo lagu eedeeyay - BBC Somali
Haweenay argagixisnimo lagu eedeeyay
Haweenay Soomaali ah oo degan Celifornia dalka Maraykanka, ayaa lagu eedeeyay in ay ku lug lahayd shirqool lacag iyo dad loogu uruurinayay koox argagixiso oo Soomaali ah si ay uga caawiso in dad lagu laayo dalka Soomaaliya, sidaas ayaa lagu sheegay dacwad lagu soo oogay maanta oo Isniin ah.
Nimca Cali Yuusuf, oo 24 jir ah ayaa ku eedaysan in ay ka wada shirqool koonfurta California iyo meelo kaleba si ay u caawiso al-Shabaab o ah maleeshiyo al-Qaeda xiriir la leh oo isku dayaya in ay abuuraan dal Islaami ah oo ka jira gudaha Soomaaliya, ayaa lagu sheegey dacwadda rasmiga ah ee lagu soo oogay.
Sida ay qortay wakaaladda wararka dalka Maraykanka ee AP, dacwad soo oogayaasha Federal-ka faahfaahin dheeraad ah oo kale kama bixin eedahan loo haysto gabadhan.
Waxay noqonaysaa qofkii afaraad ee la soo eedeeyay bishii la soo dhaafay gudaha magaalada San Diego in uu caawinayay al-Shabaab.
Qaar kale ayaa lagu eedeeyay in ay lacag uruuriyeen iyo maalgalin kalena oo loo diray kooxda xagjirka ah.
Waxaa dacwadan ay ku soo beegmaysaa iyadoo dowladda maraykanku ku dabajoogto dadka looga shakisan yahay in ay caawiyeen al-Shabaab.
Gabadhan, ayaa la xiray Jimcihii maanta ayaana maxkamad federalka ah la soo saaray.
Haweenayda dacwadda ku soo oogtay ayaa sheegtay in Nimca lagu eedeynayo in ay taageero hanti ah siinaysay argagixiso, taageero ay siinaysay ururka ajnabi ah oo argagixiso ayna ka been sheegtay markii saraakiisha FBI, kuwa canshuuraha iyo kuwa ilaalada xadka ay waydiiyeen in lacag laga yaabo in ay u dirtay cid Soomaaliya ku sugan sanadkii la soo dhaafay.